कामना सेवा विकास बैंकको लाभांश क्षमता कति ? यस्तो छ गत आवको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण
साउन ७, काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले गत आवको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
कम्पनीले आकर्षक मुनाफा आर्जन गरेको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । लगानीकर्ताले अब कम्पनीले कति लाभांश देला त भने बारेमा आकलन पनि गर्न गर्न थालेका छन् ।
गत आवको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीले रू. ७० करोड २ लाख नाफा कमाएको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा नाफा ५ दशमलव ८ गुणा बढी हो । कम्पनीले अघिल्लो आवको तेस्रो त्रैमासमा रू. ११ करोड ९७ लाख नाफा कमाएको थियो । गत आवमा कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफामा वृद्धि भएकाले नाफा बढेको हो ।
गत आवमा कम्पनीको वितरणयोग्य नाफा रू. ४३ करोड ४५ लाख २१ हजार रहेको छ । एनएफआर एस प्रणाली अनुसार कम्पनीले आर्जन गरेको खुद नाफाबाट विभिन्न शिर्षकमा छुट्याए पछिको नाफानै वितरणयोग्य नाफा हो । यही नाफाबाट कम्पनीले आफ्ना शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्दछ ।
कम्पनीको लाभांश क्षमता १६ दशमलव ३८ प्रतिशत रहेको छ ।लाभांश क्षमता वितरणयोग्य मुनाफा ÷ चुक्तापूँजी × १०० गरेर निकालिन्छ । कम्पनीले अघिल्लो आवको मुनाफाबाट गत वर्ष शेयरधनीलाई ४ दशमलव ४० प्रतिशत बोनस शेयर र शून्य दशमलव २३ प्रतिशत नगद लाभांश कर प्रयोजनको लागि वितरण गरेको थियो ।
उक्त बोनस शेयर वितरणपछि कम्पनीको पूँजी रू. २ अर्ब ६५ करोड १९ लाख पुगेको छ । गत आवको तेस्रो त्रैमासमा कम्पनीले जगेडामा रू. ८४ करोड ४३ लाख ४९ हजार र रिटेन्ड अर्निङमा रू. ४४ करोड ४८ लाख ८३ हजार सञ्चित गरेको छ ।
नाफामा वृद्धि भएसँगै कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानीमा पनि वृद्धि भएको छ ।अघिल्लो आवको चौथो त्रैमासमा कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. ४ दशमलव ७१ रहेकोमा गत आवको सोही अवधिमा वृद्धि भएर रू. २६ दशमलव ४० पुगेको हो । त्यसैगरी मूल्य आम्दानी अनुपात २१ दशमलव ९७ टाइम्स,तरलता अनुपात २२ दशमलव १० प्रतिशत र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १४८ दशमलव ६१ रहेको छ ।
बिहीवार कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ५९१ दशमलव १० कायम भएको छ । यो मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ११ दशमलव ९० रुपैयाँले कमि आएको हो ।